हेर्नुहोस् आज बिहिबार तपाईको आर्थिक राशिफल कस्तो रहेको छ ? (आषाढ शुक्लपक्ष त्रयोदशी तिथि ) - Financial Notices
श्रावण १८,२०७८ / ११ : ०३
हेर्नुहोस् आज बिहिबार तपाईको आर्थिक राशिफल कस्तो रहेको छ ? (आषाढ शुक्लपक्ष त्रयोदशी तिथि )
Financial Notices 2078-4-7
साउन ७ गते बिहिबार, आषाढ शुक्लपक्ष त्रयोदशी तिथि
मेष राशिका व्यक्तिहरुलाई आज वैदेशिक क्षेत्र, सामाजिक, शैक्षिक वा परोपकारको कामबाट लाभ हुन सक्छ र आज भाग्यले राम्रो साथ दिन सक्छ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आज समय अनुकूल नरहेकाले गर्दा काम वा व्यवसायमा अफ्ठयारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने र धनको हानी हुन सक्ने समय छ।
मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरुको आज साझेदारी काममा समय वा पैसाको लगानी राम्रो रहन सक्छ। जीवनसाथीको सहयोगले महत्वपूर्ण काम बन्न सक्छ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुलाई आज चन्द्रमा गोचरको शुभ प्रभावले दीर्घकालीन लाभको क्षेत्रमा समय र धन खर्च हुन सक्छ। रोकिएका लेनदेनहरु पनि मिल्न सक्छ।
सिंह राशि भएका व्यक्तिहरुलाई आज वैदेशिक काम, शैक्षिक काम आदिबाट लाभ मिल्न सक्छ। सन्तानको क्षेत्रबाट पनि लाभ मिल्न सक्नेछ।
आज कन्या राशिको लागि उचित समय नरहेकाले लगानी र ठुलो कारोबार आज नगर्दा शुभ रहला । मानसिक चिन्ता बढ्ने र स्वास्थ्यमा समस्या हुन सक्छ।
आज तुला राशि भएका व्यक्तिहरुको लागि राम्रो समय रहेकाले रोकिएका आर्थिक क्षेत्रका कामहरु बन्नुका साथै पदप्रतिष्ठा र मानसम्मान बढ्न सक्ने समय छ।
आज वृश्चिक राशिको लागि राम्रो समय रहेकाले आर्थिक उन्नतिका लागि गरिएका प्रयासहरु सफल रहन सक्छन्। दीर्घकालीन लगानी वा बचतको उचित समय छ।
आज धनु राशिका व्यक्तिहरुलाई चन्द्रमाको प्रभाव शुभ रहेकाले व्यवसाय तथा काम गर्ने वातावरण बन्ने हुनाले आर्थिक अवस्था सुदृढ हुनेछ ।
आज मकर राशिका लागि समय त्यति अनुकूल नरहेकाले अवसर जुटे पनि ठूलो उपलब्धि नहुन सक्छ, साथै खर्च पनि बढ्न सक्छ।
आज कुम्भ राशिको लागि राम्रो समय रहेकाले आम्दानी बढ्नुका साथै बिग्रिएका कामहरु पनि बन्न सक्ने समय छ। पहिले गरेको लगानीबाट फाइदा हुन सक्छ।
आज मीन राशिको लागि शुभ समय रहेकाले काममा रहेका समस्या हटेर काममा सहज वातावरण बन्न सक्छ। नयाँ विचारका साथ काममा सफलता मिल्न सक्छ।
अनलाइन तथा सामाजिक सञ्चालबाट हुने ठगीबाट जोगिन के गर्ने ?
साउन ३ गतेदेखी ९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
मेष राशि हुनेहरुको लागि यो साताको सुरुमा धनको आगमन बढ्न सक्नेछ। साझेदारी काममा बिशेष फाइदाको अवसर मिल्न सक्छ। व्यवसायमा उचित लाभ हुन सक्छ भने लगानी गरेको ठाउँबाट राम्रो फाइदा हुन सक्ने रहेको छ। साताको बीचमा भने शत्रुहरुको कारणले गर्दा काममा समस्या आउन सक्छ। व्यवसायमा सोचे जस्तो लाभ नमिल्न सक्छ। साताको अन्त्यमा सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रबाट लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रशासनको सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना छ।
वृष राशि हुनेहरुको लागि यो साताको सुरुको दिन आइतबार र सोमबारको दिन मानसम्मान बढ्न सक्ने रहेको छ। नयां लगानीको लागि उचित अवसर मिल्नुका साथै पहिले लगानी गरेको ठाउँबाट राम्रो नाफाको वातावरण बन्न सक्छ। साताको मध्यमा आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो सुधार हुन सक्छ भने नसोचेको ठाउँबाट धन प्राप्तिको योग पनि रहेको छ। साताको अन्त्यमा खर्च बढ्नुका साथै काममा साथीभाई तथा सहकर्मीको उचित सहयोग प्राप्त हुन नसक्ने देखिन्छ।
मिथुन राशि हुनेहरुको लागि यो साताको सुरुमा यो साताको सुरुवातको समयमा जग्गा जमिन वा सुन चाँदी जोड्न सक्ने, आम्दानी बढ्न सक्ने, बौद्धिक, शैक्षिक तथा वैदेशिक क्षेत्रको कामबाट राम्रो लाभ मिल्न सक्ने रहेको छ। साताको मध्यमा कामको माध्यमबाट पराक्रम बढ्ने, नयाँ जिम्मेवारी मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। साताको अन्त्यमा व्यवसायमा पारिवारिक तथा साथीभाईको सहयोगले महत्वपूर्ण काम सिद्ध हुन सक्ने रहेको छ।
कर्कट राशि हुनेहरुको लागि यो साताको सुरुमा खर्च बढ्न सक्ने, व्यवसायमा घाटा हुन सक्ने रहेको छ। यो समयमा नयाँ लगानी तथा नयाँ काम सुरुवात नगर्दा राम्रो रहला। साताको मध्यतिरको समयमा बौद्धिक तथा रचनात्मक कामबाट लाभ मिल्न सक्ने र बोलीले अरुलाई प्रभावित पारेर काम बनाउन सकिने रहेको छ। साताको अन्त्यमा आर्थिक क्षेत्र सबल बन्ने, नयाँ लगानी तथा शेयर बजारमा निवेश गर्नको उचित समय रहेको छ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि यो साताको सुरुवातको समयमा कामको क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन सकिने, आफ्ना सहकर्मी तथा साथीभाईबाट उचित सहयोग मिल्न सक्ने, राम्रो आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने रहेको छ । साताको मध्यमा खर्च बढ्न सक्ने, मानसिक तनाव बढ्न सक्ने रहेको छ। साताको अन्त्यमा कामको कारणले छोटो यात्रा हुन सक्ने, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम तथा व्यवसायबाट राम्रो लाभ मिल्न सक्ने रहेको छ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि यो साताको सुरुमा धनको बचत हुन सक्ने वा दीर्घकालीन लगानी हुन सक्ने, रोकिएका कामहरु बन्न सक्ने रहेको छ। साताको मध्यको समयमा सन्चित धनको वृद्धि, शेयर कारोबारबाट बिशेष लाभ हुन सक्ने रहेको छ। साताको अन्त्यमा काममा प्रगति हुन सक्ने र व्यवसायमा सफलता मिल्न सक्ने रहेको छ।
तुला राशि हुनेहरुको लागि यो साताको सुरुको समयमा आयमा वृद्धि, व्यापार वा व्यवसायबाट पर्याप्त लाभ हुन सक्ने, पारिवारिक खुसि मिल्न सक्ने रहेको छ। साताको मध्यको समयमा काममा समस्याको सामना गर्नुपर्ने, बन्न लागेको काम बिग्रिन सक्ने, अनाबश्यक खर्च हुन सक्ने समय रहेको छ। साताको अन्त्यमा कामको क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने, व्यवसायबाट सफलता मिल्न सक्ने र धनको आगमनमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
वृश्चिक राशि हुनेहरुको लागि साताको सुरुमा अनावश्यक खर्च बढ्न सक्ने, अरुको विबादमा फस्न सकिने, आफन्त वा सहकर्मीबाट उचित सहयोग मिल्न नसक्ने रहेको छ। साताको मध्य र अन्त्यको समयमा भने कामबाट मानसिक सन्तोष मिल्न सक्ने, व्यवसायमा रहेको रोकावट हट्ने र नयाँ लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ।
धनु राशिको लागि यो साताको सुरुमा आम्दानी बढ्न सक्ने, रोकिएका लेनदेन मिल्न सक्ने, काममा उचित साथ सहयोग प्राप्त हुन सक्ने रहेको छ। साताको मध्यमा धनको हानी हुन सक्ने, स्वास्थमा समस्या आउनाले काम गर्ने उत्साहको कमि हुन सक्ने, रहेको छ। साताको अन्त्यमा आयमा वृद्धि, व्यापार व्यवसायमा पर्याप्त लाभ हुन सक्ने, कामबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्न सक्ने रहेको छ।
मकर राशि हुनेहरुको लागि यो सातामा रोकिएका कामहरु सुचारु हुन सक्ने, आकस्मिक धन प्राप्त हुन सक्ने, उपहारहरु प्राप्त हुन सक्ने, कामले गर्दा मानसम्मान मिल्न सक्ने र धनको आगमनमा वृद्धि हुन सक्ने रहेको छ। साताको अन्त्यमा अनावश्यक विवादमा फसिने, समयको दुरुपयोग हुने र धन हानी हुन सक्ने रहेको छ।
कुम्भ राशि हुनेहरुको लागि यो साताको सुरुमा यात्रा वा वैदेशिक क्षेत्र सम्बन्धि काम वा व्यवसायबाट राम्रो लाभ मिल्न सक्ने देखिन्छ भने साताको मध्यमा नयाँ कामको सुरुवात वा गरिरहेको काममा नयाँ जिम्मेबारी मिल्न सक्नेछ भने व्यवसाय गर्नेहरुले आफ्नो व्यवसायको क्षेत्र विस्तार गर्न सक्नेछन्। साताको अन्त्यमा आम्दानी बढ्नुका साथै फाइदा हुने क्षेत्रमा धन वा समयको लगानी हुन सक्छ।
मीन राशि हुनेहरुको लागि साताको सुरुमा व्यवसायबाट उचित समय नदिँदा हानी हुन सक्ने, बन्न लागेको काम बिग्रिन सक्ने सक्ने, साथीभाईको सहयोग र आफन्तको सद्भाव नमिल्ने रहेको छ। साताको मध्यमा साथीभाईको सहयोगले कामहरु बन्न सक्ने, पारिवारिक समझदारी बढ्न सक्ने रहेको छ। साताको अन्त्यमा मानसम्मान बढ्न सक्ने छ।
२०७८ साउन महिनाको आर्थिक राशिफल
मेष राशि हुनेहरुको लागि साउन महिना सामान्य रहनेछ । कामका क्षेत्रमा गरिएको मेहनतको सामान्य परिणाम मिल्न सक्नेछ। शत्रुहरुले काममा समस्या गर्न सक्ने भएकाले ध्यान दिनुपर्ने छ। शारीरिक असक्ततताले गर्दा भने काममा पूर्ण रुपमा ध्यान नजान सक्छ। मानसिक चिन्ता बढ्न सक्छ। शेयर बजार तथा लगानीको लागि उचित समय रहेको छैन।
वृष राशि हुनेहरुको लागि साउन महिना राम्रो रहनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सुधार हुनका साथै आम्दानीमा पनि वृद्धि हुनेछ । रोकिएका आर्थिक कारोबारहरु सफल हुनेछन् । शेयर बजार तथा अन्य लगानीको क्षेत्रबाट राम्रो प्रतिफल मिल्न सक्छ।
काममा ध्यान दिन नसक्दा समस्या आउन सक्ने भएकाले काममा लगनशील भएर लाग्नुपर्नेछ।
मिथुन राशि हुनेहरुको लागि साउन महिना राम्रो रहनेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोत खुल्ने छन् । नोकरीमा पदोन्नति र व्यवसायमा सफलता र प्रगति हुन सक्ने र नयाँ कामको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ । राज्य वा सामाजिक क्षेत्रबाट मानसम्मान मिल्न सक्ने रहेको छ। आम्दानीमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ।
कर्कट राशिको लागि साउन महिना मध्यम छ । आम्दानी र खर्च बराबर हुन सक्ने भएकाले खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ। व्यवसायमा प्रगति गर्न सक्ने र नोकरीमा पनि उन्नति हुन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ कामको थालनी गर्न सक्ने योग रहेको छ। पारिवारिक सहयोग पनि मिल्न सक्छ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि साउन महिना राम्रो हुनेछ । व्यवसायको क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै नयाँ लगानीको अवसर मिल्न सक्छ। राम्रो सोचविचार र उचित मेहनतले काम गर्दा सोचेअनुसारको सफलता मिल्न सक्नेछ। आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रगति हुन सक्ने र सन्तुस्टि मिल्न सक्ने छ। खर्च बढ्न सक्ने रहेकाले सचेत रहनुपर्नेछ। नँया लगानीको लागि उचित समय रहेको छैन।
कन्या राशि हुनेहरुका लागि साउन महिना राम्रो छ । आर्थिक क्षेत्रमा रहेका बाधाहरु हट्नुका साथै आम्दानीमा वृद्धि हुन सक्ने रहेको छ। गरेका कामहरुबाट सफलता मिल्न सक्नेछ भने काममा नया अवसरहरु पनि मिल्न सक्ने समय छ। व्यवसायको वृद्धि हुनुका साथै उचित लाभ पनि मिल्न सक्ने समय छ । शेयर बजार तथा दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्रमा गरिएको लगानीले उचित प्रतिफल दिनेछ।
तुला राशि हुनेहरुको लागि साउन महिना राम्रो रहनेछ । काममा पदोन्नति र नयाँ अवसरहरु मिल्न सक्छ भने व्यवसायबाट राम्रो लाभ र सफलता मिल्न सक्नेछ। शत्रुहरुमाथि बिजय प्राप्त हुनेछ। सुख र आनन्दको प्राप्तिका साथै राम्रो अन्न र वस्त्रको लाभ हुन सक्ने समस्या रहेको छ। नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नको लागि उचित समय रहेको छ भने शेयर बजारबाट पनि राम्रो हुन सक्छ।
वृश्चिक राशि हुनेहरुको लागि साउन महिना सामान्य रहनेछ । पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ। छोटो यात्रा हुन सक्नेछ। कामबाट वा सामाजिक क्षेत्रबाट मानसम्मान मिल्न सक्ने समय छ। काम वा व्यवसायमा भने केहि अबरोध आउन सक्ने सम्भावना छ। अनावश्यक विवादमा फस्न सक्ने भएकाले गर्दा बोल्दा विचार पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ।
धनु राशि हुनेहरुको लागि साउन महिना सामान्य रहनेछ । काममा अबरोध र व्यवसायमा घाटाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने विश्वास गरेकाहरुबाट पनि धोका हुन सक्ने भएकाले ध्यान दिनुपर्नेछ। नयाँ काम सुरु गर्न वा लगानीको लागि उचित समय रहेको छैन र पुरानै काममा अलिक धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने रहेको छ। बोलीले गर्दा बन्न लागेको काम बिग्रिन सक्ने भएकाले बोल्दा विचार गर्नुपर्नेछ।
मकर राशि हुनेहरुको लागि साउन महिना मध्यम रहनेछ । काममा वा व्यवसायबाट सोचेको जस्तो आम्दानी गर्न सकिएला । आर्थिक क्षेत्रमा रहेका बाधाहरु पनि हट्नेछन्। परिवार वा आफन्तमा विवाद हुन सक्ने र शारीरिक अस्वस्थता हुन सक्ने रहेकाले गर्दा ध्यान दिनुपर्ने रहेको छ। साझेदारी कामबाट राम्रो फाइदा लिन सकिनेछ। पति वा पत्नीको सहयोगले महत्वपूर्ण काम बन्नेछ।
कुम्भ राशि हुने हरुको लागि साउन महिना राम्रो रहन सक्नेछ । व्यापार व्यवसायमा राम्रो उन्नति हुन सक्ने र नोकरीमा पदोन्नति मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। नयाँ कामको सुचारु गर्ने अवसरहरु पनि रहेका छन्। मङ्गल ग्रहको विषम प्रभावले गर्दा विवाद हुन सक्ने रहेकाले आफ्नो बोलीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ।
मीन राशि हुनेहरुको लागि साउन महिना सामान्य रहनेछ। पराक्रममा वृद्धि र शत्रु माथि विजय प्राप्त हुन सक्ने रहेपनि काममा अवरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्ने भएकाले अलिक धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ। खर्चमा पनि केहि वृद्धि हुन सक्छ। आफ्नो बुद्धि महत्वपूर्ण काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। सामान्य लगानीको लागि समय शुभ रहेको छ।
Read More ____
यस्ताे छ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट (पूर्णपाठ सहित)
नेपालको बैंकिङ इतिहास र विकासक्रम (सामान्य जानकारी)
पुनरकर्जा के हो ? हेर्नुहोस् नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनरकर्जा सम्बन्धी व्यवस्था
वित्तीय साक्षरता र यसको आवश्यकता (Financial Literacy)
धितोपत्र/ शेयरमा लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
Some important banking terminology you need to know.
Note: Financial Notices मोबाईल एप्स Android Download र iOS Download गरेर आफ्नो दैनिक, साप्ताहीक, मासिक र वार्षिक आर्थिक राशिफल हेर्न सक्नुहुनेछ ।